Calaamadaha Ninka Wax Jecel - Daryeel Magazine
Raggu way ku kala duwan yihiin calaamadaha ay muujiyaan, balse waxa jira qaar ay ka siman yihiin. Kala duwanaanta abuurka ragga ayaa keena kala dookha.
1.Nuglaan: waa calaamad lagu arko ninka, waxay ka turmaysaa inuu culays xoog lihi haysto oo jacayl ah. Wuxuu nugayl u muujinayaa gabadha uu jecel yahay iyo cida ka ag-dhaw Calaamadaha ugu caansan
3.Ka sheekayn: waxaad arkaysaa ninka oo ka faalloonaya gabadha uu jecel yahay. Wuxuu si joogto ah uga hadlaa dhaqamada fiican ee gabadha, gaar ahaan,quruxdeeda, hadalkeeda, qosolkeeda, socodkeeda, xaragadeeda, sheekadeeda, farriinteeda IWM. Laakiin marku arrimahan ka hadlayaa waa markuu la joogo saaxibadiisa dhabta ah. Wuxuu soo celcelinayaa hadaladii dhexmaray ee isugu dambeeyey.
Astaamaha Lagu Garto Ninka Wanaagsan Ee Mustaqbal Doonka Ah Baro Qaababka Aad Iskaga Reebi Kartid Wiil Ku Jecel Oo Aanad Ka Helin